Esemokwu dị n'etiti mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe dị iche na etiti mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa
Sergio Gallego | | Mgbanwe ihu igwe
A na-ejikarị ha dịka okwu n'ụzọ na-ezighi ezi, okwu mgbanwe ihu igwe na okpomoku uwa mgbe ha putara ihe abụọ dị iche iche. O doro anya na echiche abụọ a na-ezo aka na mbibi ọ na-ata ụwa niile n’ihi aka mmadụ na ndị nwere idozi ngwa ngwa.
M ga-akọwa n'ụzọ doro anya n'okpuru gịnị ka okwu nke ọ bụla nwere nke mere ka o doo gị anya.
Mgbe ndị ọkachamara na-eji okwu mgbanwe ihu igwe, na-ezo aka mgbanwe dị ukwuu na ihu igwe nke na-emetụta akụkụ ndị dị ka okpomọkụ, mmiri ozuzo ma ọ bụ ikuku na nke ahụ ruo ọtụtụ iri afọ. Kama, okpomọkụ gburugburu ụwa na-ezo aka na ịrị elu na-aga n'ihu na nkezi okpomọkụ na ụwa dum.
A na-eme ka okpomoku a site na uche nke griin haus nke ahụ bụ na ikuku na n'onwe ya bụ ihe ọ bụla karịa otu akụkụ nke akpọrọ mgbanwe ihu igwe.
O doro anya na mgbanwe ihu igwe obu ezigbo nsogbu na mbara uwa dum na-ekpom oku site na mmali na oke. Dabere na ụfọdụ data a pụrụ ịdabere na ya, ọnọdụ okpomọkụ nke mbara ala arịgola karịa 7 degrees na narị afọ gara aga. Ndị ọkà mmụta sayensị na-ebu amụma na nkezi okpomọkụ ga-abawanye site na 1.1 degrees na 6.4 degrees na XNUMXst narị afọ, ndị a bụ n'ezie nchegbu data ga-eme mgbanwe dị oke egwu na ihu igwe.
Mmetụta ọjọọ ndị a nke mgbanwe ihu igwe na-eme kwa ụbọchị na mpaghara ọ bụla nke ụwa. N'ọtụtụ ebe mmiri ozuzo abawanyela ma kpatara idei mmiri, ebe na mpaghara ndị ọzọ nke ụwa, na ntụle, enwere oké ọkọchị . Okpomọkụ na-efegharị efegharị n’oge ọnwa ọkọchị bụ karia ma na-akpata ọnụọgụ ka ukwuu na ọkụ nke oke ọhịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Ihe dị iche na etiti mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa
Onyinyechi ugha (@onyeukwuudo) dijo
Ndewo, ezigbo ndetu, naanị na m chere na ị mehiere mgbe ị na-ekwu na ọnọdụ okpomọkụ amụbaala ogo 7 na narị afọ gara aga, ihe ziri ezi ga-abụ 0.7, ana m ahapụ gị njikọ a nwere ike ịba uru.
Zaghachi La Cala (@calamtz)
Anyanwụ radieshon na mbara ụwa
Chọpụta ihe kpatara ugwu mgbawa na-agbawa